Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: သံဃာတော်များကို အာဏာပိုင်များမှ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေ
သံဃာတော်များကို အာဏာပိုင်များမှ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေ
ရဲကျောင်း၊ ဆင်ဖြူ နှင့် စိန်မမကျောင်းသံဃာတော်များ ဆွမ်းကြီးလောင်းလှူခံရာမှာ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခံရ
Mon 22 Sep 2008, လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ
မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသော ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းများစုပေါင်း၍ မုဒုံမြို့နယ်တွင် ဆွမ်းကြီး လောင်းလှူခံရာတွင် မော်လမြိုင်မြို့ ရွေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့သော ရဲကျောင်း၊ ဆင်ဖြူနှင့် စိန်မမကျောင်းမှ သံဃာတော်များကို အာဏာပိုင်များမှ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။
ဒီကနေ့ မုဒုံမြို့နှင့် ယမန်နေ့ကမာဝက်တွင် ကျင်းပသော ၄၄ ကြိမ်မြောက် ဆွမ်းကြီးလောင်းလှူပွဲတွင် သံဃာ တော်အပါး ၇၀၀၀ ကျော် ဆွမ်းလောင်းခံယူရာတွင် သံဃာတော်များမှ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ်မှုများ ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း ကောလဟာလ ထွက်နေခဲ့သည်။
ထိုသို့ကောလဟာလနှင့် လက်ကမ်းပေးစာများ ပြန့်နေခဲ့သဖြင့် ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရယကနှင့် ဘုရား ဒကာကျောင်းဒကာများကို ဆွမ်းလောင်းလှူမှုပြုလုပ်ရာ လမ်းတစ် လျှောက်တွင် လုံခြုံရေးအနေဖြင့် ချထား ခဲ့ သည်။
“ဘာမှ ဖြစ်မသွားဘူး၊ သံဃာတော်တွေလည်း ရွတ်ဖတ်မှုတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး၊ ဆရာတော်ကြီး တွေက စိုးရိမ်နေကြ တာပါ၊ ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူး” ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် ကမာဝက် ဘုရားဒါယကာတစ်ဦးက ရှင်းပြ သည်။
သို့သော်လည်း သံဃာထုအချင်းချင်းမှ ၎င်းးဆွမ်းကြီးလောင်းလှူပွဲကို မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇျာယ်ကြရန် တိုက်တွန်း မှုများရှိခဲ့သည်ဟု မွန်သံဃာတော်တစ်ပါးက ဆိုသည်။
လုံခြုံရေးအတွက် မွန်ပြည်နယ်ရဲမင်းကြီးနှင့် မုဒုံမြို့နယ် မယကဥက္ကဌတို့မှ ဦးဆောင်၍ ယမန်နှစ် မော် လမြိုင်မြို့ စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေးတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းများမှ သံဃာတော်များ ဆွမ်းခံသွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် မျက်လုံးဒေါက်ထောက် လိုက်လံစောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်ဟု ဆရာတော်များက မိန့်ဆို သည်။
“ဒီနှစ် ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲမှာ သံဃာတော်များ မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်မှုတွေ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် နောင်နှစ်မှာ ဆွမ်း လောင်းမှုတွေ လုပ်ခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကတော့ စိုးရိမ်စရာပဲ” ဟု ဆွမ်းကြီးလောင်းလှူပွဲဦးဆောင်သော ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တအိန္ဒက မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်က သံဃာတော်များမှ ဦးဆောင်၍ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နောက်တွင် ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲကို ကျင်းပခွင့် မရရှိခဲ့ပေ။ ယခုနှစ်တွင်လည်း အာဏာပိုင်များမှ ပထမတွင် ခွင့်ပြုချက်မပေး၍ ဒေသခံဆရာတော်များမှ ခရိုင်အဆင့် နှင့်တိုင်းအဆင့်သို့သွား၍ ခွင့်ပြုချက် တောင်းယူခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြမှု မဖြစ်ပွားအောင် ဆရာတော်များ အာမခံထားခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by Peaceful Walking at 7:15 PM
စစ်အစိုးရက မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင် ပြဌာန...
Statement Of MPU
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၄)လ ပြည့်် ၀မ်းနည...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ခြင်း အနှစ်(...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ထူထောင်ခြင်း အနှစ်...
အန်အယ်လ်ဒီ နှစ် ၂၀ ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ပါတီဝင်တချိ...
Letter to 20th Anniversary of NLD by FDB
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရမည်ဟု တစညပါတီမျှော်လင်...
လွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးရေးတောင်းဆိုမှု ပြန်ရုပ်သိမ်းရန် ရဲ...
ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ကို ကသာထောင်မှာ မိသားစုက ထောင်ဝင်...
1st Anniversary to commemorate the Saffron Revolut...
ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗုံးကွဲပြီးနောက် လုံခြုံရေး ထပ်မံတ...
ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (11) b
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (11) a
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (10)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (9)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (8)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (7)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (6)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (5)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (4)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (3)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (1)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ဘယ်သူလဲ (2)
သံဃာတော်များကို အာဏာပိုင်များမှ အနီးကပ် စောင့်ကြည်...
NLD ၏ ကျေညာချက် ၉.၂၂.၂၀၀၈
အဝေးရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးများက မနီလာသိန်းအတွက် စိ...
ရုံးထုတ်စဉ် အရှင် ဂမ္ဘီရ နေမကောင်းဖြစ်
ထောင်တွင်း ၁၉ နှစ်ကျော်ကြာ နေခဲ့ရသူ သတင်းစာဆရာကြီး...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် မရှိဟု အေ...
အင်တာနက် အသုံးပြုသူ များကို စစ်အာဏာပိုင်များက ပိုမ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် သံဃာတော်၅ ပါးစုပြီး မသွားရဲ
မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စ ကုလကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီ...
ဒေါ်စု အားဆေး သွင်းပေးရသည် ဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်...
US criticises Burma religious freedom record
အနောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး မှ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွ...
မုံပီး၊ သဲသဲ သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 19 2008 17:...
အန္တရာယ်ရှိ တရုတ်နို့မှုန့်များအကြောင်း စစ်အစိုးရ ရှ...
ပြည်ပ မြန်မာသတင်းဌာနများ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်များ တိုက်ခိုက်ခ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ရုံးထုတ် မိသားစု ကြားနာ...
ဒေါ်စု တောင်းဆိုသည့် ကန့်သတ်ချက် တချို့ကို အာဏာပိုင...
ရဲချုပ်စွပ်စွဲချက်ကို အတိုက်အခံက ငြင်း